एमाले–माओवादी एकता वार्ता : माधव नेपालले ‘एकछिन् पर्खनुस्’ भनेपछि यसरी रोकियो लिखित सहमति.... | Ratopati
एमाले–माओवादी एकता वार्ता : माधव नेपालले ‘एकछिन् पर्खनुस्’ भनेपछि यसरी रोकियो लिखित सहमति....
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २, २०७४ chat_bubble_outline0
काठमाडौं–एमाले र माअ‍ोवादीवीच पार्टी एकता लगायतका विषयमा सहमति जुटाउने र शक्ति बाँडफाँड गर्ने विषयमा आज करिव–करिव सहमति जुट्यो । तर, त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने बेला भने एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ प्रस्ताव आगाडि सारे । नेपालको यस्तो प्रस्तावपछि आज लिखित सहमति जुटन नसेकेको एमाले स्रोतले बतायो ।
नेपाललको प्रस्ताव के थियो ?
एमाले–माओवादी वार्ता मूलत एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यविभाजनमा केन्द्रित थियो ।
संवादमा ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजन टुंगियो पनि ।
तर, अन्य नेताको कार्यविभाजनसम्म वैठक प्रवेश गरेको थिएन ।
एमाले स्रोतका अनुसार त्यत्तिकैमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले ‘तपाईंहरुको मात्रै व्यवस्थापन भएर हुँदैन । अरु साथीको वारेमा पनि एउटा निर्णय गरौँ’ भन्न प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।
नेपालको यस्तो प्रस्तावपछि आज एमाले र माओवादीवीचको सहमति लिखित हुन पाएन ।
थप संवादका लागि भोलि फेरि ओली र प्रचण्डवीच पहिला ‘वान टू वान’ संवाद हुनेछ ।
त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको वैठक बस्ने स्रोतको भनाई छ ।
सहमति जुटेका विषय र विवादित विषयलाई हल गर्ने विषयमा सहमति पत्रको मस्यौदा बनाउन कार्यदल बनाउने तयारी भएको छ ।
भोलिको वैठकमा कार्यदल बन्ने छ ।
आज के के विषयमा सहमति बन्यो ?
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आलोपालो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । एकीकृत पार्टीमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड को समान हैसियतमा रहनेछन् । दुई अध्यक्षबाहेक बहुपद सृजना नगर्ने सहमति छ । यस अनुसार प्रधानमन्त्री हुने नेता पार्टीको सेरमोनियल अध्यक्ष र अर्को नेता अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष हुनेछन् । अर्थात शुरुमा ओली प्रधानमन्त्री र सेरमोनियल अध्यक्ष तथा प्रचण्ड अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष हुनेछन् । दोस्रो कार्यकालमा ओली अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री एवं सेरमोनियल अध्यक्ष हुनेछन् । सुरुकै सहमति अनुसार पाँच वर्षे कार्यकालमा दुवै आधा–आधा सयम प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
सहमति अनुसार राष्ट्रपति र उपसभामुख एमालेलाई तथा उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादी केन्द्रलाई हुनेछ । एकतापछि पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ रहनेछ भने एकसय भन्दा कमको केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति छ । संगठनात्मक संरचनाबारे गृहकार्य गर्न र पार्टीको अन्तरिम विधानका लागि कार्यदल गठन गरिनेछ ।
बैठकपछि नेताहरुले भने
संयोजन समितिका सदस्य एवं केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘तत्काल सरकार बनाएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका काममा मुलुकलाई अघि बढाउन ढिला भइसकेकाले नयाँ सरकार चाँडै बन्छ । कुरा नमिलेर होइन, आज सकारात्मक र गम्भीर कुरा भएको छ । समग्र विषयलाई टुङ्गो लगाउन आजकै छलफललाई निरन्तरता दिन बिहीबार बैठक बस्नेछ ।’
संयोजन समितिका सदस्य एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले छलफल जारी रहेकाले निष्कर्ष बाहिर ल्याउन नसकिएको बताए । तर उनले थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
आजको बैठकमा पार्टी एकताका लागि संगठनात्मक र वैचारिकसम्बन्धी दुई अलगअलग कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको समितिका सदस्य एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, ‘एकताको खाकाबारे ९५ प्रतिशत मिलिसकेको छ, ५ प्रतिशत मिलाउन पुनः बस्ने तय भएको हो, अब एकता हुने भन्नेमा कुनै विवाद छैन ।’
दुई पार्टीबीच निर्वाचनअघि गत असोज १७ मा पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित चुनावी तालमेल भएको थियो ।
जीवनमै पहिलो पटक दौरा सुरुवाल लगाएका बाबुराम भट्टराईले भने, ‘देश अनुसारको भेष’
पाकिस्तानी कैदीको भारतको जेलमा ढुङ्गाले हानीहानी हत्या
प्रचण्डको प्रस्ताव : सुदूरपश्चिम प्रदेशको गड्डाचौकीबाट रेलमार्ग बनाउन सुरु गर्नुपर्छ
नेपाल प्रहरीका ४० एसपीको सरुवा, २६ जनाको पदस्थापना, को कहाँ ?
कालु पाँडेको समाधिस्थलबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘गोरखा’ कता पर्छ’
ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालयमा बम विस्फोट
विमान अपहरणको धम्कीपछि भारतका एयरपोर्टमा उच्च सतर्कता, यात्रुहरुलाई जहाजको भर्याङमा समेत चेकजाँच